Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Blossom Hotel Houston dia hanomboka hanomboka amin'ny faramparan'ny fahavaratra
Vaovao Mafana US • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Blossom Hotel Houston, fananana mihaja vaovao natolotry ny Blossom Holding Group, ekena iraisam-pirenena, dia hanokatra ny varavarany amin'ny faran'ny fahavaratra izao. Any amin'ny 7118 Bertner Avenue sy ny The Texas Medical Center no mifanila aminy, manantena ny hampiditra ny vondrom-piarahamonina Houston sy ny besinimaro ny trano fandraisam-bahiny manerantany, ny fisakafoanana tsara ary ny toerana eny an-toerana hitondra ny fizahan-tany sy ny asa eto amin'ny tanàna ny hotely mihaja.
Ilay trano fandraisam-bahiny mihaja eo akaikin'ny Texas Medical Center ihany no hanolotra toerana iray hahitana sy hanavaozana ny mpandeha sy ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
Blossom Hotel Houston dia manome asa mihoatra ny 150 ho an'ny mponina eo an-toerana.
Ny ekipan'ny Blossom Hotel dia naneho ny fahavononany ho an'ny fiarahamonina nandritra ny tafiotra ririnina nanimba tamin'ity taona ity, nanamboatra fantsona voaroaka ary nanampy fianakaviana 120 farafahakeliny miaraka amin'ny vola lany.
"Na eo aza ny fanamby 18 volana lasa izay, izahay ao amin'ny Blossom Hotel Houston dia miorina amin'ny fanoloran-tena hanome lanja ny toekarena eo an-toerana ary hisy fiatraikany tsara amin'ny fiarahamonina iray manontolo," hoy i Pete Shim, tale jeneralin'ny Blossom Hotel Houston. "Ataonay laharam-pahamehana ny fanomezana asa ho an'ireo mponina eo an-toerana amin'ny asa maherin'ny 150 ary manome toerana vaovao hipetrahan'ny mponina ao an-toerana sy hankalazain'izy ireo miaraka amin'ny olon-tiana."
Blossom Hotel Houston dia naneho ny fahavononany ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana nandritra ny tafiotra ririnina nanimba tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Ny ekipa fandraisam-bahiny, notarihin'ny tompony Charlie Wang, dia nanampy ny mpiasa sy ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny orinasam-panorenan'i Wang hanamboarana ireo fantsona voadona, nanampy fianakaviana 120 farafahakeliny miaraka amin'ny sarany feno natokan'i Wang manokana. Ity fanahim-piarahamonina ity dia hanatanteraka amin'ny ho avy miaraka amin'ny drafitra hampanan-karena an'i Houston amin'ny fanomezana fanomezana isan-karazany amin'ny asa soa sy sosialy.
Blossom Hotel Houston dia hanampy ny vahiny hahita izay mahatonga an'i Houston toerana tena manokana sy miavaka hitsidihana. Avy amin'ny toerana afovoany akaikin'ny Kianja NRG, ny distrikan'ny tranom-bakoka malaza, ny toeram-pivarotana, ny fisakafoanana ary ny fialamboly, ny hotely vaovao dia handray ny vahiny hahita ny mariky ny manodidina manodidina azy ary koa hanavao sy hamelombelona eo an-toerana miaraka amin'ny fanaka lafo vidy, fahaiza-mandray vahiny, ary tsara fisakafoanana. Io ihany koa no trano fandraisam-bahiny misy trano fivarotana lehibe indrindra eo akaikin'ny ivon-toeram-pitsaboana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, manolotra traikefa mampiantrano vahiny ambony mandritra ny fanatrehana fotoana sy fombafomba.
Ho fanoherana ny monikeran'ny Houston ho Space City, ny hotely dia manamboatra endrika volavolaina amin'ny volana miaraka amin'ny fanaingoana minimalist, paleta loko ary toerana milamina izay hita manerana ny trano. Ny habaka fihaonana ao amin'ny hotely dia misy koa ny anarana ara-tsindrimandry amin'ny volana miresaka momba ny fifandraisan'ny trano amin'ny tantaran'ny aerospace ao an-toerana sy ny antso avo iraisam-pirenena.